Jamaahiirta Real Madrid oo xalay ka carootay tababare Zidane – Gool FM
Jamaahiirta Real Madrid oo xalay ka carootay tababare Zidane
(Madrid) 24 Oktoobar 2016. Markii ay ciyaartu mareysay daqiiqadii 65-aad kulankii ay xalay Real Madrid dirqiga uga adkaatay Athletic Bilbao, tababare Zidane ayaa garoonka ka soo saaray Isco taa oo ka careeysiisay jamaahiirta Madrid ee ku sugneyd Bernabeu.
Kulanka ayaa marayay 1-1 markii uu Zidane go’aansaday inuu badelo kubbad qaabeeyaha reer Spain balse ma ahayn go’aan ay ku maqsuudeen taageerayaasha.
Go’aanka Zidane ma ahayn mid si fiican u shaqeeyay maadaama uu laacibku qaadanayay kulan aad u hufan isagoona ka soo shaqeeyay goolkii uu Benzema ku daah furay kulanka.
Madrid ayaa qorsheynaysay inay iska iibiso Isco intii uu furnaa suuqa kala iibsiga balse waxaad iminka moodaa inuu kalsooni ka helayo tababaraha reer France kaddib wacdarooyinkii uu dhigay kulamadii dambe.
"Waa inaan ka daba tagnaa Juventus" - Leandro Paredes